ချင်းအမျိုးသားနေ့ဟူသည် . . . . . . . | Myanmar Digital News
ချင်းအမျိုးသားနေ့ဟူသည် . . . . . . .
Feb 22,2020 |04:56 |
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ... ။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် ကမ္ပည်းတင်ထားသည့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ...။ ဤနေ့သို့ရောက်တိုင်း ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဖလမ်းမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော ချင်းအမျိုးသားညီလာခံကို အမှတ်ရကြပါလိမ့်မည်။ ဖလမ်းမြို့ ချင်းအမျိုးသားထု တစ်ရပ်လုံးညီလာခံသည် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို မွေးဖွားသန့်စင်ပေးလိုက်သလို ချင်းတိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညီညွတ်မှု ရလဒ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်ပင်ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုး။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ဟူသော ပင်မမျိုးနွယ်ကြီး ရှစ်မျိုးနှင့် ယင်းတို့၏ မျိုးနွယ်စုများအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုး ရှိကြသည်။ ယင်းတို့အသီးသီးတွင် နေ့ထူးနေ့မြတ်များရှိကြသည်။ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသားနေ့သည်လည်း တစ်ခုအပါ အဝင်ဖြစ်သည်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပေါ်ပေါက်ရခြင်းသည် ချင်းမျိုးချစ် ခေါင်းဆောင်တို့၏ တောင်တန်းပြည်မ ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ်ရေးရယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုမှ စတင်မျိုးစေ့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့သည် ညီနောင်တူဖွား တိုင်းရင်းသား သွေးချင်းများနှင့်အတူ နယ်ချဲ့လက်အောက်တွင် ခါးသီးဖွယ်ကောင်းသည့် ဘဝကို ခံစားခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အဘက်ဘက်မှ အဖိနှိပ်ခံရရုံသာမက ပြည်မနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားတို့နှင့်ပါ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခံရခြင်း၊ အသိဉာဏ် အမှောင်ချခံရခြင်း၊ ဘာသာရေးဗန်းပြပြီး ယဉ်ကျေးမှု ဖျက်ဆီးခံရခြင်း စသည့် နယ်ချဲ့တို့၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကို ခေါင်းငုံ့မခံဘဲ ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ပြီး သွေးမြေကျခံကာ နယ်ချဲ့တို့ကို ရဲရဲတောက်တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၃၃ ခုနှစ် မတ် ၂၇ ရက်တွင် ချင်းမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင် ဦးဝမ္မသူးမောင် ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မင်းတပ်နယ် နော်ချောင်းတိုက်နယ်ရှိ မသုံဒုံကျေးရွာတွင် ချင်းအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယညီလာခံတွင် ၉၁ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး၌ ချင်းတောင်တန်းအား ထည့်သွင်းပေးရေးအပါအဝင် တောင်းဆိုချက်ကိုးချက်ကို တောင်းဆိုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းသည် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို သန္ဓေတည်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ချင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ တတိယအကြိမ် ညီလာခံကို ဝမ္မသူးကျေးရွာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤတတိယအကြိမ် ညီလာခံတွင် တောင်းဆိုချက် ကိုးချက်ကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံ ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်၍ တောင်းဆိုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြန်သည်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရနှင့် ချင်းအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့တို့ ကန်ပက်လက်မြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် လူထုကိုယ်စားလှယ် သုံးထောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် မကွေးခရိုင် ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး မက္ကရီကင်းက တောင်းဆိုချက် ကိုးချက်ကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ချင်းအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကို မတရားအသင်း ကြေညာပြီး ခေါင်းဆောင် ကိုးဦးကိုပါ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ချင်းလူထုတစ်ရပ်လုံး မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ တိုက်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ၃၆ ဦးတို့ ရာထူး ခန့်စာကို နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်ထံ ပစ်ပေါက်အပ်နှံကာ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ အခွန်မဆောင်၊ ကူလီထမ်း၊ အစိုးရအမှုမထမ်း၊ အစိုးရနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရန် ပြည်သူ့အင်အားဖြင့် ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ချင်းအမျိုးသားတို့၏ ရဲရင့်ပြောင်မြောက်သည့် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ပိုမိုအရှိန်ရရှိစေခဲ့ကာ လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပါ အရေးပါလာခဲ့သည်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့ သန္ဓေပိုမိုရင့်မာလာခဲ့သည်။
(၇၂) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို မင်းတပ်မြို့ မြို့မဘောလုံးကွင်း၌ ကျင်းပစဉ်။ ခွီရှိန်းမောင်း ခရိုင် (ပြန်/ဆက်)
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ အစိုးရဖွဲ့ရာတွင် ဦးဝမ္မသူးမောင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ချင်းရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ချင်းဝိသေသတိုင်းတွင် နယ်ချဲ့လက်အောက်ခံ တိုက်သူကြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ရှိနေသေးသည်။ ထိုစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ချင်းအမျိုးသားညီလာခံကို ဖလမ်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းညီလာခံသို့ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ချင်းတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ၅၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ဖလမ်းညီလာခံ ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးတွင် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တိုက်သူကြီး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် ချင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ ဆန္ဒအရ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဤညီလာခံတွင်ပင် ချင်းမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တို့ ချင်းအမျိုးသားထု တစ်ရပ်လုံး သူ့ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်တန်းပြည်မ ပူးပေါင်းကာ လွတ်လပ်ရေးအရယူရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် ကန်ပက်လက်မြို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲ၌ အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့မှု၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖလမ်းညီလာခံ၌ တိုက်သူကြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖျက်သိမ်းကာ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကျင့်သုံးရန် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်ပေးနိုင်ခဲ့မှု စသည့်သမိုင်းအစဉ် အလာကောင်းခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်ကို “ချင်း အမျိုးသားနေ့”ဟု သတ်မှတ်သွားရန် တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
(၇၂) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် အနော်ရထာလမ်းနှင့် ကုန်းဘောင်လမ်းထောင့် (၁၅) ရပ်ကွက် အမှတ် ၁၈၃ ၌ ကျင်းပစဉ်။ ကျော်ဆန်းဦး (ပြန်/ဆက်)
ဤနေ့သည် တိုက်သူကြီးအုပ်ချုပ်ရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ လူထုကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များ စည်းလုံး ညီညွတ်သောနေ့၊ နယ်ချဲ့ဩဇာခံကို တွန်းလှန်သောနေ့၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးကို လူထုလက်သို့ စတင်အပ်နှင်းပေးသောနေ့ စသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည့်အပြင် ချင်း အမျိုးသားနေ့ကို မွေးဖွားသန့်စင်ပေးသော နေ့ထူးနေ့မြတ်ပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်ကို ချင်းအမျိုး သားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ဦးဝမ္မသူးမောင် မွေးဖွားရာဒေသကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် မင်းတပ်မြို့ မြို့မအားကစားကွင်းတွင် အခမ်းအနား စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ စဝ်ရွှေသိုက်၏ သဝဏ်လွှာကို ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးများ၏ သဝဏ်လွှာကို ကချင်ရေးရာဝန်ကြီး ဆမားဒူးဝါးဆင်ဝါနောင် ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ချင်းအမျိုးသား နေ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် (၇၂)နှစ် မြောက်သို့တိုင် ရောက်ရှိခဲ့ပေပြီ။
ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုး စုစည်းနေထိုင်လျက်ရှိကြသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုစနစ်နှင့်အညီ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ချီတက်လျက်ရှိပေသည်။ တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် ပြည်သူများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အဟန့်အတား ဟူသမျှကို ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏ သွေးချင်းညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့်အတူ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြရပါမည်။ သို့မှသာ အမိနိုင်ငံတော်ကြီး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။